Wararkii ugu danbeeyay weerar saakay lagu qaaday Sarkaal ka tirsanaa Nabad Sugida Soomaaliya | Sagal Radio Services
Wararka ayaa sheegaya in weerarkan uu ka dhacay degmada Xamar Jajab, waxaana lagu dilay sarkaal lagu magacaabayay Ibraahim Axmed Faarax oo la sheegay inuu ahaa Taliye kuxigeenkii Argagixiso la dirirka.
Dad goob joogayaal ah ayaa sheegaya in gaariga ay wateen saraakiishan lagu hor-gooyay gaadiid kale, kadibna rasaas lagu furay, iyadoo markii dambe kooxihii dableyda ay baxsadeen.
Saraakiil ka tirsan dowladda ayaa sheegay in sarkaal ka tirsan Hey;adda Nabadsugida uu ku dhintay weerarkaas, mid kale oo askari ahaa uu dhintay, markii gaari ay la socdeen la rasaaseeyay.
Wararka qaar ayaa sheegaya in dad u gurmaday markii la weeraray gaarigan ay u sheegeen inay wariyeyaal yihiin, balse markii la geeyay Isbitaal Madiina la ogaaday inay yihiin saraakiil ka tirsan Hey;adda Nabadsugida.
Al-Shabaab ayaa sheegatay inay weerarkan ka dambeysay, waxaana war qoraal lagu soo qoray baraha taageera ee Internet-ka lagu sheegay in weerarkaas ay iyaga fuliyeen.
Ma jirto wax war ah oo ka soo baxay Hey,adda Nabadsugida oo ku aadan dilka sarkaalkan iyo askariga kale, waxaana weerarada ka dhacaya Muqdisho ay yihiin kuwo sii kordhaya.
Waa weerarkii labaad noociisa oo ka dhaca magaalada Muqdisho, tan iyo markii ay bilaabatay bisha Ramadaan, waxaana 3-dii bishan weerar kan la mid ahaa lagu dilay Xildhibaan ka tirsan Baarlamaanka oo lagu magacaabayay Maxamed Maxamuud Xayd, markii gaari ay la socdeen uu gaari kale rasaaseeyay.